सावधान ! लोकप्रिय ‘बेसारे फोटो एप’ हुनसक्छ खतरा « Sansar News
सावधान ! लोकप्रिय ‘बेसारे फोटो एप’ हुनसक्छ खतरा
११ असार २०७७, बिहीबार १४:२५
काठमाडौं । बुधबार बिहानै पूर्वपत्रकार एंव साझा पार्टीका संयोजक रविन्द्र मिश्रले आफ्नो फेसबुकको प्रोफाइल फोटो परिवर्तन गर्दै लेखे ‘युवामा विद्रोहको संकेत देखियो’ । उनले अहिले सामाजिक सञ्जालमा ट्रेण्डमा रहेको ‘बेसारे फोटो’लाई आफ्नो प्रोफाइल फोटो बनाएका थिए । मिश्रले सामाजिक सञ्जालमा बेसारे फोटोसहित लेखेका छन्, ‘सामाजिक सञ्जालमा फैलिरहेको यो सौम्य, सुन्दर बेसारे रङ्गमा आजका युवाको विद्रोहको आवाज, आक्रोश र भविष्यको आकांक्षा पोतिएको छ भन्दा फरक नपर्ला। तपाईंलाई के लाग्छ ?’
मिश्र मात्रै नभई राजनीतिक तहका उच्च नेतादेखि बुद्धिजिवि मानिएका अनि पत्रकारितामा गनिएकाले पनि बेसारे फोटो शेयर गरेका छन् । बेसारे फोटोप्रति चर्चित कलाकारदेखि समाजका चर्चित हस्ति पनि लोभिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकार सुर्य थापाले पनि आफ्नो फेसबुक पेजमा बेसारे फोटो शेयर गरेका छन् । उनले आफ्नो फोटोमा धेरैको प्रतिक्रिया पनि पाएका छन् ।
गत बिहिबार राष्ट्रिय सभामा प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीले कोरोना भाइरसको उपचारमा बेसारको महत्वलाई उल्लेख गर्दै दिएको अभिव्यक्ति निकै चर्चामा रह्यो । प्रधानमन्त्रीको बेसारे अभिव्यक्तिसँगै नेपालमा बेसारे फोटोको चर्चा भएको हो ।
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति पछि नेपालमा ‘बेसारे फोटो’ को चर्चा
बेसारे फोटोमार्फत अहिले सामाजिक सञ्जालमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई व्यंग्यात्मक ढंगले विरोध गरिएको छ । कतिपयले फोटो अभियानलाई विद्रोहको रुपमा समेत टिप्पणी गरेका छन् ।
युवा नेताहरु लोभिए बेसारे फोटोमा
अहिले सामाजिक सञ्जालमा ‘फोटो ल्याब पिक्चर इडिटर’ नामक मोबाइल एपको पहेंलो तस्बिर शेयर गर्दै ‘बेसारे फोटो अभियान’ भनेर अभियान नै चलाइएको छ । विशेष गरि युवा नेताहरुले यस्तो फोटोलाई रोचक मान्दै शेयर गरेका छन् । सत्तारुढ पार्टीका युवा संगठनका संयोजक रामप्रसाद सापकोटा ‘दिपशिखा’ले पनि बेसारे फोटोलाई शेयर गर्दै ‘सोसाईटिमा उपस्थिति जनाईयो !’ भनि प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को स्वकीय सचिवको जिम्मेवारीमा रहेकी गंगा दाहालले पनि बेसारे फोटो शेयर गरेकी छिन् । चर्चित नेतृ रामकुमारी झार्की, नविना लामा र बलावती शर्मालगायतले पनि बेसारे फोटो शेयर गरेका छन् । बेसारे फोटोको समुहमा युवा नेता ठाकुर गैह्रै पनि सहभागी भएका छन् ।
के हो ‘बेसारे फोटो’ ?
बेसारे फोटो रसियन मोबाइल एप डेभलपर कम्पनी लिनाकर इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड नामको कम्पनीले तयार गरेको ‘फोटो ल्याब पिक्चर इडिटर’ नामको एपमार्फत तयार हुन्छ । यो एप सन् २०१० को अन्तिम साता सार्वजनिक भएको थियो ।
एपमा सजिलोसँग पेन्ट फोटो तयार गर्न मिल्छ । एपमा ९ सयभन्दा बढि तरिकाले फोटोलाई इडिट गर्न मिल्ने सुविधा छ ।
दक्षिण एसियाली देशमा लोकप्रिय बन्दै
अहिले फोटो ल्याब पिक्चर इडिटर मोबाइल एप दक्षिण एसियाली देशहरु नेपाल, भारत, पाकिस्तान र बंगालादेशमा लोकप्रिय छ । यस मोबाइल एपका सबैभन्दा बढि प्रयोगकर्ता एसियाली देशका नै हुन् । युरोपेली देश अष्ट्रिया, फ्रान्स र जर्मनलगायतका देशमा पनि यो एप टप ट्रेण्डमा छ ।
सन् २०१० को डिसेम्बरमा सार्वजनिक भएको यस एपलाई कतिपय देशले भने प्रयोगमा प्रतिबन्धसमेत लगाएका छन् । दक्षिण अमेरिकाका कतिपय देशमा यस एपलाई सुरक्षा खतरासँग जोडेर प्रतिबन्ध लगाइएको छ । बंगालादेशमा पनि यस एपलाई प्रतिबन्ध लगाउने बारेमा बहस हुँदैछ ।
रसियन कम्पनी लिनाकर इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेड पटक–पटक अमेरिकी गुप्तचर संस्था सिआइएसँग जोडिएर आउने गरेको छ। फोटो एपमार्फत व्यक्तिका महत्वपूर्णं सूचना सिआइएलाई शेयर गरेको आरोप कम्पनीमाथि छ । हालै मात्र लिनाकरको मोबाइल फोटो ल्याब एपमाथि बंगालादेशमा प्रतिबन्ध लगाउनेबारे कुरा उठेको थियो ।
कम्पनीमाथि अमेरिकी गुप्तचरसँग डाटा शेयर गरेको आरोप
रसियन कम्पनी लिनाकर इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेड पटक–पटक अमेरिकी गुप्तचर संस्था सिआइएसँग जोडिएर आउने गर्दछ । फोटो एपमार्फत व्यक्तिका महत्वपूर्णं सूचना सिआइएलाई शेयर गरेको आरोप कम्पनीमाथि छ । हालै मात्र बंगालादेशको संसदमा समेत चर्चित फोटो ल्याब पिक्चर इडिटर एपको विषयमा गम्भिर विषय उठेको थियो ।
फोटो ल्याब एपले मोबाइलमा इन्स्टल गर्ने वित्तिकै सबै डाटाहरु सजिलैसँग लैजान सक्छ । व्यक्तिको फोटो मात्रै नभई भएको सबै फाईल सजिलैसँग कम्पनीको डाटामा शेयर हुन्छ । एपमा डाटा शेयर नगरेको खण्डमा एपबाट कुनै पनि फोटो इडिट गर्न सकिँदैन् ।
सावधान ! फोटो एप हुनसक्छ खतरा